Hindiya: Tahriibinta dahabka oo dhaliyey khilaaf siyaasadeed |
Xiisad siyaasadeed ayaa ka abuurantay dalka Hindiya kaddib marki xidhmo alaaba ah oo ku socday qunsuliyadda Isutagga Imaaraadka Carabta ee gobolka Kerala laga helay 30 kiilo oo dahab ah.
Saraakiisha cansuuraadka ee gigada diyaaradaha caalmiga ee gobolka Kerala waxay dahabkaasi ka heleen xidhmo alaab ah oo ay lahayd qunsuliyadda Isutagga Imaaraadka Carabta.
Dahabkaasi oo lagu soo qariyey qalb ay safaaraddu lahayd.
Waxayna xidhmooyinka alaabta ee dahabka laga dhex helay ay ku socdeen qunsuliyadda Isutagga Imaaraadka Carabta uu ku leeyahay Thiruvananthapuram.
Imaaraadka waa uu diiday inuu alaabtaasi wax ka ogyahay, waxayna sheegtay in kiiskaasi loo xidhay mid ka mid ah shaqaalaha horay qunsuliyadda uga shaqeyn jray.
Halka ay mas’uuliyiinta gobolka ay sheegayaan inuu jiro qof kale oo arrintaa loo soo xiray.
Safaaradda Isutagga Imaaraadka Carabta ee dalka Hindiya barteeda Twitter-ka waxay talaadadi ku soo qortay iney billaowday baaritaan arintan la xiriirta kaddib marki la sheegay in dahabkaasi laga helay alaab ku socotay qunsuliyaddeeda gobolka Kerala.
“Maamulka Imaaraadku wuxuu carrabka ku adkeeyey iney dambiilayaasha kiiskan ku lugta leh ay gelin oo keli ah dambi weyn balse ay isku dayeen iney waxyeelleeyaan ama sumcad xumo ay u keenaan howlgalka Imaaradaka ee Hindiya” ayey tiri safaaraddu.
“Waxaa naga go’an arrintan inaan si weyn ugala shaqeyno hay’adaha dowliga ee dalka Hindiya si looga sal gaaro raadka cidda faldambiyeedkan ka dambeysay.”
Danjiraha Isutagga Imaaraadka Carabta wuxuu wargeyska Gulf News uu u sheegay shaqaalahan hore oo qunsuliyadda ka shaqeeynayey in bilooyin ka hor shaqada laga eryey “maadaamaa uu shaqadiisa sidi la rabay uu u qaban waayey”.
Caaqilka gobolka Kerala waxay mucaaradka ugu baaqeen inuu xilka iska casilo kaddib marki ay arrintan soo ifbaxday. Wuxuu sida oo kale uu diiday inuu arrintan wax lug ah uu ku leeyahay.
Hase yeeshee, mas’uul sare oo maamulkiisa ka tirsan ayaa arrintan darteed xilka looga qaaday.
Wakaaladda wararka ee Reuters waxay sheegtay, duullimaadyada caalamiga ee u istaagay cudurka safmarka ee coronavirus awgii ayaa keentay in dahab aad u badan dalka Hindiya laga tahriibiyo sida oo kalana sababtay inuu qiimaha dahabka sare u kaco.
Somasundaram P.R. oo ah madaxa gole ay leeyihiin shirkadaha soo saara dahabka ee Hindiya wuxuu Reuters u sheegay: “Tahriibinta dahabka inuu hoos u dhaca la filayo marka la eego xaaladda hadda lagu jiro. Maadaamaa saadka ay tahriibinta dahabka u baahn tahay ay si weyn u saameeyeen xayiraadaha ka dhashay Covid-19.
Wuxuuna sheegay inuu rajeeynayo dahabka la tahriibiyo inuu sidi hore ka yarado, iyada oo 2019-kii dalka Hindiyablaga tahriibiyey 115-120 tan oo dahab ah.